Ngeshwa, cider apula ingajwayelekile kakhulu CIS, nakuba sekunesikhathi eside isiphuzo ethandwa oludakayo emazweni amaningi aseYurophu. Babathanda kakhulu ke lapho ukutshala mass lamagilebhisi ngeke abe phezu izimo zezulu.
Apple cider uvele ezikhathini zasendulo. Lapho kukhulunywa ngaye okokuqala ebhaliwe ke washiya edumile Umlobi ongumRoma nesazi-mlando noPliny. Enkabeni yalo, lesi siphuzo lutho kodwa isithelo iwayini. Lokhu cider apula wenza kusukela juice okumsulwa kuphela, ekhiqizwa kwezinye izindawo yeFrance, nezinye abakhiqizi abaningi abavela emazweni ehlukene (eJalimane, e-Austria, eSwitzerland, eNgilandi kanye nabanye) buhlanjululwe ngamanzi.
Ukuze womshini eliphezulu apula cider efanelekayo akubona bonke izinhlobonhlobo apula. Ngo eFrance nakwamanye amazwe, abantu abaningi-producing sasithola lesi siphuzo, ezifuywa izinhlobo okhethekileyo, obizwa ngokuthi "apula cider". Kukholakala ukuthi ofanele kakhulu lokhu isiphuzo izinhlobo 48 kuphela, phakathi okuyizinto amnandi, okumunyu, ezinoshukela, ebabayo futhi omuncu. Umbandela eyinhloko ukulungela ukukhiqizwa cider kuba phambi esithelweni okubizwa ngokuthi "tannin" futhi asidi yabo. Inhlanganisela elikhulu apula: 40% amnandi futhi 40% - ababayo, 20% - acid.
Apple cider abakhiqizi ezahlukene ukulungiselela cishe ngendlela efanayo. Ngokugcwele izithelo ezivuthiwe of izinhlobo ezahlukene akhethiwe kanye elixutshwe. Ngezinye izikhathi zokupheka zisebenzisa ngezabelo ezahlukene amiselwe amagama emikhiqizo ehlukahlukene edayiswa isiphuzo. Kwezinye zazo engeza ethile amagonandoda noma ezinye izithelo. Of ochotshoziwe izithelo khama juice futhi wamukele lokho okubizwa ngokuthi "wort", ngemva kwalokho-ke elicwengekileyo futhi batheleka oki imiphongolo. Ebumnyameni, amakamelo ezomile emgqonyeni ushiye amasonto amahlanu. Ngalesi sikhathi kukhona wort yemvelo isibilile. Ngemva kokuphela ukuvutshelwa etholwe ongaphakeme utshwala isiphuzo kokuba castle 5-7%. Ngaphambi bottling apula cider elicwengekileyo, elicwengwé, pasteurized. Ezimweni eziningi, lesi siphuzo ahlanganiswe ne-carbon dioxide, kuphumele aphakeme elikhazimulayo izithelo iwayini. Okuningi ezibizayo iyona ndlela "champagne", okungadingi zehluke kwamagilebhisi Champagne ukukhiqizwa. Dry apula cider kungaba "ukusekela" eliphezulu nogologo. Ngenxa yalokhu inqubo etholwe isiphuzo nge ubulukhuni abafika kwabangu-10% utshwala. Kukholakala ukuthi ayanda amandla isiphuzo, emakamu carbon dioxide is kangcono balondolozwa. cider Ready batheleka amabhodlela thick-ngodonga, unezela nalokho esincane isixazululo ushukela, elibangela inqubo kabusha lwezithelo olubangela ukubila. Lapho ukungezwa ibhodlela 8 g yesixazululo ushukela ngemva kwakhiwa ukuvutshelwa egabheni is a ingcindezi ka 2 eziphindwe. Lokhu isiphuzo ubhekwa 'sokuthula'. Lapho ukungezwa 12g Kumiswa a ingcindezi 3 eziphindwe ( "aphakathi"), futhi 16 g eyatholakala ngesikhathi kakhulu "bubbly" apula cider ne-stout.
Abalandeli utshwala zemvelo kalula uzenza isiphuzo. Lapho nje 'Idili ", le cider ungaqala ukulungiselela kusuka apula sesivuthiwe. Ukuze wenze lokhu, khetha apula izinhlobo (omuncu, sweet nebabayo), geza, usika isikhala owonakele Wormholes (uma ikhona), susa Isiqu. Izithelo wanqunywa, nengulube noma juicer. Juice kusukela ikhekhe uwoyela Ufakwa glass amabhodlela, imiphongolo noma ezinye iziqukathi senzelwe umkhiqizo lwezithelo olubangela ukubila. Capacitance ushukela owenezelwe (100-120 ngamunye 1 kg isisindo). Umthamo embozwe gauze bese efakwa endaweni ezomile, ezifudumele. Ngemva 3-4 izinsuku apula ikhekhe ziyabuya kwamanzi, ijusi izohlala phansi. I juice elicwengekileyo, ikhekhe amuncekela kanye nalokho sengezwe futhi ushukela (100 g ngalinye 1 L). Umthamo eneziqongo ne esephetha therefrom tube sokususwa kwe-carbon dioxide, abakuphela kwabo egxilile imbiza yamanzi. Ngakho juice ukulungele is isibilile izinsuku 14-20. Ekupheleni ukuvutshelwa ijusi is elicwengekileyo futhi batheleka amathini noma amabhodlela ukuthi uphawu uvalwe. Ukuze isiphuzo elikhazimulayo ungasebenzisa USiphon ne-carbon dioxide.
Courgette e cream sauce nge garlic: izindlela eziningana
Incazelo esibhakabhakeni. Imephu esibhakabhakeni